Pepephone 200 Mb Fiber dị na ọnụahịa kacha mma | Gam akporosis
Pepephone aghọwo otu n'ime ndị ọrụ kachasị ewu ewu na ahịa. Ugbu a ha nwere ọtụtụ nhọrọ nke ọnụego, ma maka ekwentị na eriri ọnụego. Ọnwa ole na ole gara aga, ọnụego eriri 100 Mb malitere inye ndị ọrụ okpukpu abụọ megabytes, ihe na-agaghị agbanwe agbanwe. Ma ugbu a, e nwere mmelite ọhụrụ na ya.
Yabụ ị nwere ike nweta otu n’ime kpakpando Pepephone nwere mmụba karịa, na ọnụahịa kacha mma. N'ihi na nke a bụ ihe ọzọ nke igodo maka ịga nke ọma nke onye ọrụ, na-ekwusi ọnụ ala mgbe niile kasị mara mma.
Ọnụego na-enye anyị a nnukwu ọsọ ọsọ ịntanetị n'ụlọ anyị, zuru oke ma ọ bụrụ na anyị chọrọ ya maka ọrụ ma ọ bụ ọmụmụ ihe, nke mere na anyị nwere nchebe mgbe niile inwe ike ịnwe mmekọrịta dị mma ma dị mma. Kedu ihe ọnụego a gụnyere?
1 Eriri Rate 200 MB Pepephone
2 Etu esi eme nkwekọrịta a
Eriri Rate 200 MB Pepephone
Dị ka aha ya na-egosi, a ọnụego na-enye anyị 200 symmetrical Mb nke Ntanetị n'ụlọ. Njikọ nke na-eji eriri optic, nke na-enye anyị nnukwu ọsọ, yana njikọ dị ezigbo mma. Nchebe nke ọtụtụ ndị ọrụ na-achọ ga-enwe ike ịchọta ọnụego a n'oge niile.
Isi mgbanwe nke ewebata bu na Pepephone nwere mkpuchi Internetntanetị ugbu a site na Movistar. Nke a bụ ihe ga-enye ndị ọrụ ọtụtụ udo nke uche, nyere nnukwu netwọkụ nke Movistar nwere na Spain taa. Yabụ ọ bụrụ na ihe emee, ha ga-eji mkpuchi nke onye ọrụ ahụ. Yabụ, ị nwere ike iji ịntanetị oge niile. Na mgbakwunye na Movistar, ha nwekwara ohere ịnweta mkpuchi site na Orange na MásMóvil.
Ọnụ ego nke ọnụego a bụ euro 34,60 kwa ọnwa, Gụnyere VAT. Ọnụ ọnụ maka ezigbo njikọ. Nke a bụ ọnụego nwere ọnwa iri na abụọ. Yabụ, ọ bụ ezigbo nhọrọ ma ọ bụrụ na ibi n'ụlọ obibi ụmụ akwụkwọ, nke mere na ị nwere njikọ n'ime afọ niile, iji nwee ike ịmụ akwụkwọ ma ọ bụ rụọ ọrụ n'enweghị nsogbu ọ bụla. Ọzọkwa ọ bụrụ na ị gbanwee adreesị gị ọ bụ ezigbo ọnụego.
Ọ bụrụ na ị chọrọ ị nwere enwere ike ịhọrọ ọnụego a na-enweghị adịgide. Na nke a, Pepephone jụrụ maka ndebanye ndebanye nke 90 euro ma gụnye rawụta maka ndị ọrụ. Yabụ ị nwere ike ịhọrọ nchikota nke kachasị gị mma n'oge niile.
Etu esi eme nkwekọrịta a
Ọ bụrụ na ị nwere mmasị inweta ọnụego a, nzọụkwụ iji goro ya dị mfe. Can nwere ike ịgụ ihe niile gbasara ya, yana ọnọdụ ya ma soro usoro iji kwụọ ụgwọ ya njikọ a. N'ime ya ị nwere ozi niile ịchọrọ ịma banyere ọnụego a, iji mee mkpebi n'ụzọ kwesịrị ekwesị.
Dịka ị pụrụ ịhụ, otu n'ime ọnụ ọgụgụ kacha mma nke Pepephone ugbu a ka mma. Echefula na ohere a ma debe ya ugbu a!
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Ndị ọrụ ekwentị » Nweta ọnụego fiber 200 Mb site na Pepephone na ọnụahịa kacha mma
Lucas Gonzalez dijo
Ọ bụ ihe kwesịrị ekwesị na Pepephone aghọwo otu n'ime ụlọ ọrụ na-ewu ewu kachasị ewu ewu n'afọ ndị na-adịbeghị anya n'ihi na ọ na-enye ọnụego asọmpi, 200 mb nke eriri maka 34,60 dị ka ọnụ ahịa ezi uche dị na ya.
Zaghachi Lucas González
M tụgharịrị na Pepephone n'ihi nghọta ya na ezigbo ahịa ya, ha na-agbasawanye ahịa ma nwee oke mkpuchi, na-atụ aro nke ukwuu!
Xiaomi Mi 8 Explorer Edition ga-enweta MIUI 10 na njedebe nke ọnwa
Achịcha achịcha na-abịa Samsung Galaxy S6 site na aka ndị ọzọ